Dhismaha Wasaaradda Bartoolka oo la Daah-furay iyo xogtii Soma Oil oo lala soo Wareegay - See more at: http://www.hiiraan.com/news/2015/Dec/wararka_maanta9-94093.htm#sthash.F215ByIg.dpuf | Gaaloos.com
Home » bilicda » News » Dhismaha Wasaaradda Bartoolka oo la Daah-furay iyo xogtii Soma Oil oo lala soo Wareegay - See more at: http://www.hiiraan.com/news/2015/Dec/wararka_maanta9-94093.htm#sthash.F215ByIg.dpuf
Dhismaha Wasaaradda Bartoolka oo la Daah-furay iyo xogtii Soma Oil oo lala soo Wareegay - See more at: http://www.hiiraan.com/news/2015/Dec/wararka_maanta9-94093.htm#sthash.F215ByIg.dpuf
Waxaa Muqdisho lagu qabtay maanta munaasabad xarigga looga jawarayay dhismaha cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdanta Somalia, taasoo ku taalla bartamaha magaalada Muqdisho, iyadoo wasaaraddu kula soo wareegtay xog-ururin oo la xiriirta baarista shidaal oo ay horay u sameysay shirkada Soma Oil & Gas.
Xaruntan cusub ee wasaarada batoolka ayaa ku dhow barlamankii hore ee Somalia. Iyadoo labadii sannadood ee lasoo dhaafay ay wasaaraddu ku shaqeynaysay dhismaha wasaaradda waxbarashada Somalia.
Sidoo kale, markii ugu horreysay muddo 25-sano laga joogo, wasaaraddu waxay awoodi doontaa inay hesho xarun iyada u gooni ah; waxaana dhismahaan uu ka koobnaan doona: qaybta sheybaarrada, keydinta macluumadka iyo xafiisyada shaqaalaha wasaaradda iyo hawl-wadeennada ay ku shaqeyn doonaan.
Munaasabada ayaa waxay shirkada Soma Oil & Gas kuwoo wareejisay dowladda Somalia kusoo wareejisay xog-macluumaad shidaal oo ay ka ururisay qaybo ka mid ah badda fog ee Soomaaliya. Xogta lasoo wareejiyay waxay ka dhalatay xog-ururintii la sameeyay sanadkii 2014-kii, taas oo ku saleysan heshiiska u dhaxeeya dowladda Somalia iyo Shirkadda Soma Oil & Gas.
Wasiirka batroolka iyo macdanta xukuumadda Somalia, Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo hadal ka jeediyay munaasabadd ayaa yiri. “Daah-furitaanka dhismaha Wasaaradda oo ah mid cusub waa aqbaar fiican, gaar ahaan waxay kusoo beegmaysaa xilli ay dowladdu ku howlan tahay dib u dhiska hay’adaha Qaranka.” Wuxuuna intaas ku daray.
“Dhismahaan wuxuu yeelanayaa Qolka Keydka Xogta (Data Room); taasoo muhiim u ah horumarinta baarista shidaalka Somalia. Haddii la rabo inay Soomaaliya soo saarto shidaal, horumar dhaqaalana ay gaarto, waxaa marka hore muhiim ah in la xog la ururiyo, lana diy-aariyo aqoon-yahanno Soomaliyeed oo fahmi kara xogtaas.”
Isagoo sii hadalay ayuu wasiirku intaas raaciyay. “Qolka Keydka Xogta waxa lagu Xafidi doonaa macluumadka ahmiyadda gaarka u leh wasaarada batroolka iyo macdanta DFS iyo ciddii la leh iskashi ganacsi-wadaag ah, waxaana xogtaan laga iibinayaa dadka danaynaya inay Soomaaliya maal-gashadaan.”
“Kaalmada dhaqaale oo ay shirkadda Soma Oil & Gas ka geysatay sameynta Qolka Keyda xogta iyo wada-shaqeynta sokeeye ee kala dhaxeeysa ee suuq-geynta xogta iyo wasaaradda waxay muujinaysaa faa’iidada wada-shaqeyneed ee ay la leedahay. Waxaan ku Qanacsan-nahay in xogtani muujin doonto fursadaha wanaagsan ee ka jira Badda Fog (Off-shore) ee Somalia,” ayuu wasiirku mar kale yiri.
Qolka Keydka Xogta Waxaa la dhigi doonaa:
1. Xogta oo wali sideeda ah oo aan la fasirin (Raw data);
2. Xogta oo laga baraandagey (Processed data);
3. Xogta la turjumay (Interpreted data);
4. Xogta la keenay, midda laga baraandageey iyo midda la turjumay;
5. Xogihii hore ee Soma Oil & Gas kasoo heshay meelo kale si jolojiyada dalka loo fahmo;
Ugu dambeyn, helidda xog-dhameestiran waa qayb ka mid ah qorshaha guud ee lagu hour-marinaayo baarista shidaalka Somalia. howlaha kale ee ay wasaaradu waddo waxaa ka mid ah; sidii Somalia ay u yeelan lahayd aragti mideysan oo ku aadan ka faa’iidaysiga arimaha shidaalka, diyaarinta sharuucda iyo heshiiska wadaaga wax-soo-saarka, sameynta shirkada shidaalka Soomaaliya iyo hay’adda nidaaminta shidaalka dalka.
HADDABA: SOO ROGO WARBIXINTAN OO AFKA INGIRIISKA KU QORAN;
Title: Dhismaha Wasaaradda Bartoolka oo la Daah-furay iyo xogtii Soma Oil oo lala soo Wareegay - See more at: http://www.hiiraan.com/news/2015/Dec/wararka_maanta9-94093.htm#sthash.F215ByIg.dpuf